Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways oo duulimaad toos ah ka bilaabeysa magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaShirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways oo duulimaad toos ah ka bilaabeysa magaalada Muqdisho
Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways oo duulimaad toos ah ka bilaabeysa magaalada Muqdisho
19/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways ayaa qorsheyneysa in ay bilowdo duulimaad toos ah oo isku xiri doona magaalada Muqdisho iyo Nairobi ee dalka Kenya.
Qorshahan ay wado shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways ayaa kusoo aadaysa isbuuc uun ka dib markii shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya ay ku dhowaaqday in ay bilaabeyso duulimaadkeeda ugu horeeya ee Muqdisho 2-da bisha November ee soo socota.
Shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya ayaa joojisay duulimaadyadii ay Soomaaliya ku imaan jirtay kadib markii uu qarxay dagaalkii uu dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhacay todobaatameeyadii qarnigii lasoo dhaafay.
Guddoomiyaha Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways Michael Joseph oo la hadlayay warbaahinta Star ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay bilaabaan duulimaadyo Muqdisho ah balse Guddoomiyaha ayaa ka gaabsaday in uu wax faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo.
“Haa, waan qorsheyneynaa suurta galnimada arrinkan, qoryeshaasha weli waxa marayaan heer bilow ah, waxa ay u baahan tahay wadahadallo iyo habraacyo habraacyo kala duwan in la sameeyo” ayuu yiri Joseph.
Xog ay heshay warbaahinta Star ee dalka Kenya ayaa sheegtay in wakiillo ka socda Shirkadda diyaaradaha ee Kenya ay joogaan magaalada Muqdisho iyagoo qiimeyn ku wada jidka ay isticmaali laheyd diyaaradda waxaana la filayaa in ay maanta ku laabtaan magaalada Nairobi.
Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways ayaa 54 duulimaad oo caalami ah sameysa, 44 kamid ah duulimaadyadaa waxa ay ku sameysaa dalalka Afrika waxaana la qorsheynayaa in ay 28-la bishaan ay duulimaad ku tagto garoonka caalamiga ah ee Gaabon ee magaalada Libreville.
DAAWO SAWIRO:- Taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Kismaayo
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo dhiseysa guddiga tacliinta sare ee dalka